အစ္စလာမ်မစ် အကြံပေးလွှတ်တော် - ဝီကီပီးဒီးယား
အစ္စလာမ်မစ် အကြံပေးလွှတ်တော်သည် အီရန် နိုင်ငံအခြေခံဥပဒေစည်းမျဉ်းများ အတည်ပြုရေးဆွဲရာတွင်အဓိကဖြစ် သည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်းမဲဆန္ဒအလိုက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အီရန် လွှတ်တော်၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မဂျလစ်စေမိုကဒ်ဒပ်္စ = မွန်မြတ်သည့်အစည်းအရုံး အနေဖြင့် အစ္စ လာမ်မစ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ၊ အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဟူ၍လည်းခေါ်တွင်သည်။ အခြေခံစည်းမျဉ်း နှင့် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံတော်ဥပဒေအရ ယခင်ကအမည်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဖြစ်ပြီး ၁၃၅၉ သီးရ် လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက၎င်းအဖွဲ့အစည်းကို အစ္စလာမ်မစ်လွှတ်တော် ဟုူ၍ အမည်တပ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်၏အဆိုပြုတင်သွင်းချက်များကို စောင့်ကြပ်ရေးအဖွဲ့၏အတည်ပြုချက်ရရှိပါကတရား ရေး နှင့်အကောင်ထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရေးဌါနများသို့ တရားဝင်ကြေငြာပေးသည်။ အချို့သောအရေးကြီးကဏ္ဍ များဖြစ်သည့် စီးပွားရေး ၊ နိုင်ငံရေး ၊ လူမှုရေး နှင့်ယဉ်ကျေးမှု ကိစ္စရပ်များ၌ ဥပဒေအတည်ပြုသတ်မှတ်ရန်အ တွက် ရှု့ထောင့်စုံမှစစ်ဆေးခြင်း လူထုထံမှတိုက်ရိုက်မဲဆန္ဒခံယူခြင်း တို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည် ၊ ထိုသို့ဆန္ဒမဲခံယူ ရာတွင်လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အဆိုပြုချက်အပေါ် ထောက်ခံမဲသည်သုံးပုံနှစ်ပုံရှိရမည်ဖြစ်သည်  အစ္စလာမ်မစ်လွှတ်တော်သည် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်မှမသက်ဆိုင်ဘဲသီးခြားရပ်တည်လျှက်ရှိပြီးလွှတ် တော်၏ဆုံးဖြတ်ချက် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်စပ်လျှဉ်းပြီး အပြင်မှအခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမှဝင်ရောက် စွက်ဖက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ လက်ရှိတွင်လည်း အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင်စုစုပေါင်းအယောက် ၂၉၀ ရှိ သည် ၊ အလီအာရ်ရှီးရ်လာရ်ယေဂျာနီ သည်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်။.
၁ အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်
၂ အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်၏တာဝန်ပိုင်းနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာများ
၃ အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ
၄ လွှတ်တော်အတွင်း တိုင်းအလိုက် နေရာထိုင်ခုံများ~
၄.၁ သက်ဆိုင်ရာသာသနာအလိုက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
၅ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် ၊ ရပိုင်ခွင့် နှင့်အတိုင်းအတာများ
၆ တော်လှန်ရေးပြီးနောက်ပိုင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်မှု
၇ အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပုံ
၇.၁ (က) အသက်အပိုင်းအခြားအပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်ခြင်း
၇.၂ (ခ) ယာယီဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်ရေး
၇.၃ (ဂ) အမြဲတမ်းဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး
၈ အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်နှင့်ဆက်နွယ်သောဌါနများ
၉ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အင်တာနက် အဆက်အသွယ်
၁၀ လွှတ်တော်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်‍‍‍‍‍
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်စည်းမျဉ်းဥပဒေ ၆၂ အရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုပြည်သူ့မဲဆန္ဒဖြင့်ရွေး ချယ်တင်မြှောက်သည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို လေးနှစ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည် ။ သက်တမ်းမပြည့်မီ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်တွင်လွှတ်တော်မ ရှိသည့်အချိန်ဟူ၍မရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ထားသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဦးရေသည် အယောက် ၂၉၀ ဖြစ်ပြီး ၁၃၆၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၁၀ နှစ်တစ်ကြိမ်လူ့အခွင့်အရေး ၊ နိုင်ငံရေး ၊ ပထဝီဝင်အနေအထားတို့အပေါ် မူတည် ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို အယောက် ၂၀ ခန့်တိုးမြှင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဇရ်သွရှ်သီ ၊ ကလီမီယါးန် ၊ ခရစ်ယါန် ၊ ကိလ်ဒါနီ တို့မှလည်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်။ ရွေးချယ်တင်မြှောက်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အတိုင်းအတာအရည်အချင်း အရေအတွက်သည်လည်း ဥပဒေ အတိုင်းဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေး၌သုံးပုံနှစ်ပုံ တက်ရောက်ပါက၎င်း အစည်းအဝေးကို အတည်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုတင်သွင်းမှုများ ၊ မူကြမ်းရေးဆွဲမှုများကိုအတွင်းဥပဒေများ နှင့်အညီအတည်ပြုသတ်မှတ်သည်။ အချို့သောထူးကဲသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ အ စည်းအဝေး၌ တက်ရောက်ရမည့် လွှတ်တော်ဦးရေကို သတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီတက်ရောက်မှသာ အတည်ပြု ဆွေးနွေးသည်။
စစ်ပွဲကာလတွင် စစ်ရေးပြဿနာများရှုပ်ထွေးနေမှုကြောင့် သမ္မတ၏အကြံပေးချက်၊ လေးပုံသုံးပုံလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏အဆိုပြုချက်၊ စောင့်ကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ထောက်ခံချက်များဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲများပြုလုပ်နိုင်သ လို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလည်း ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီ အချိန်အထိလက်ရှိလွှတ်တော်မှ တာဝန်များကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားရမည်ဖြစ်၏။
အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်၏အစည်းဝေးပွဲများသည် တရားဝင်ထင်ပေါ်စွာဆွေးနွေးရမည်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး ရလဒ်များကို ရေဒီယို နှင့်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှကြေငြာဖေါ်ပြပေးသွားရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်အ ရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်သာ လှို့ဝှက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်နိုင်ပြီး လှို့ဝှက်အဆိုတင်သွင်းမှုများသည်လည်း စောင့်ကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ရှေ့ရောက်ပါဝင်မှု လေးပုံသုံးပုံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထောက်ခံပေးမှုဖြင့်အ တည်ပြုနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်များကို အရေးပေါ်အခြေအနေကာလလွန်သွားပါက အများပြည်သူ သိသာစေရန် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးရမည်ဖြစ်သည်။ .
အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်၏တာဝန်ပိုင်းနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
-အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်သည်အလုံးစုံစည်းမျဉ်းများကို အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေပေါ်မူတည်ပြီးရေးဆွဲနိုင်သည်။.
- လွှတ်တော်သည် နိုငံတော်မှတရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော မဇ်ဟဘ် ၏ဓမ္မသတ်များ ၊ နိုင်ငံတော်အခြေခံစည်း မျဉ်းဥပဒေများနှင့်ဆန့်ကျင်သည့် ဥပဒေများကိုရေးဆွဲသတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။.
- လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကသာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
-စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၏ အကျယ်ရှင်းလင်းချက်များမှာ လွှတ်တော်ကောင်းကျိုးများအတွက်ဖြစ်သည်။
- အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဝန်ကြီးများ ဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးပါက လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အခြေံမူကြမ်းရေးဆွဲ ထားမှုများကိုလည်း အနည်းဆုံးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦး၏အကြံပြုချက်ဖြင့်လက်ခံထားမည်ဖြစ်သည်။.
- ဥပဒေ ၊ အကြံပြုချက်များနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်သည့် မူကြမ်းများသည်အထူးသဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာရမည့်ဥပဒေများ ဆိုပါက ၊ အများပြည်သူ၏ အကျိုးစီးပွားကိုလျော့နည်းသွားစေမည် အသုံးစ စရိတ်များမြင့်တက်လာမည် ဆိုသည့်အပေါ်မူတည်နေလျှင် လွှတ်တော်သည်၎င်းကိစ္စများကို ဖြရှင်းနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးရှိမှသာ၎င်းအခြေခံမူကြမ်းများကိုလက်ခံပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
-အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်သည် တစ်နိုင်ငံလုံး၏အရေးကိစ္စများကို လေ့လာစမ်းစစ်ခွင့် ပါဝင်စွက်ဖက်ခွင့်ရှိသည်။
-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၏ ပေးပို့စာများ သဘောတူစာချုပ်စာတမ်းများသည် လွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်၌ရှိရမည် ဖြစ်သည်။.
-	နယ်စပ်နယ်နမိတ်စည်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်မှုကို လုံးဝတားမြစ်ထားသည်။ နိုင်ငံကောင်းကျိုးအတွက်အချို့ သောအသေးစားပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်ရာတွင်လည်း နှစ်နိုင်ငံနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှုင်းဆောင်ရွက်ရမည်မှာ သတ် မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပိုင်မြေကိုလည်းထိခိုက်မှုမျိုးလုံးဝမရှိစေရ ၊ လေးပုံငါးပုံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ၏အတည်ပြုချက်လည်းရှိရမည်။
-စစ်အစိုးရ ကာလရှည်အာဏာသိမ်းပိုက်ထားခြင်းမျိုးကိုလည်း တားမြစ်ထားသည် ၊ စစ်ကာလနှင့်အရေးပေါ်အ ခြေအနေမျိုးတွင်သာ အစိုးရမှလွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်ဖြင့် ယာယီအုပ်ချုပ်ခွင့် အာဏာပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်ဖြစ်စေ ရက် ၃၀ ထက်မပိုစေရ ၊ အကယ်၍အရေးပေါ်အခြေအနေများဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေပါက အစိုးရက အထူးဂရုပြုရမည်ဖြစ်ပြီး စစ်တပ်ကို ဆက်လက်အာဏာလွှဲပေးရန် လွှတ်တော်ထံမှ နောက်တစ်ကြိမ် ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ - ( ပြည်တွင်းပြည်ပ ) အကြွေးယူခြင်း အကြွေးပေးခြင်း ကူညီပံ့ပိုးခြင်းများကို အစိုးရကလွှတ်တော်၏အတည် ပြုချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
- နိုင်ငံခြားပညာရှင်များ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုကို အစိုးရကတားမြစ်ထားသည် ၊ အရေးပေါ်လိုအပ်သည့်အခြေအနေမျိုး တွင်လွှတ်တော်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။.
-ပြည်သူပိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် အစိုးရထိန်းသိမ်းထားသော ပစ္စည်းများကို ရွှေ့ပြောင်းပိုင်ခွင့်မရှိ လိုအပ် သည်ရှိသော်လွှတ်တော်၏အတည်ပြုထောက်ခံချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။.
-လွှတ်တော်သည် ဥပဒေတစ်ခုခုအားအတည်ပြုသတ်မှတ်ရန် တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ် ခုကိုတာဝန်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိပါ ၊ အကယ်၍လိုအပ်ခဲ့သော်မိမိတို့အတွင်းရှိ ကော်မရှင်များကိုတာဝန်ပေးနိုင်သည် ထို အနေအထားတွင်ဤကဲ့သို့သော ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုများသည် စမ်းသပ်ကာလထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအတည် ပြုချက်မှာလွှတ်တော်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
- အဖွဲ့အစည်းများ ဝန်ကြီးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပြီးချိန်နှင့်မည်သည့်ကိစ္စမဆို မဆောင်ရွက်မီအရင် နိုင်ငံ တော်သမ္မတ မှလွှတ်တော်၏ဆန္ဒကိုခံယူရမည်ဖြစ်သည်။.
- မည်သည့်ကိစ္စမျိုးကိုမဆို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လေးပုံတစ်ပုံမှ သမ္မတ သို့မဟုတ် ဝန်ကြီးများထံမှ၎င်းတို့ ၏တာဝန်ပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မေးမြန်းစရာများရှိသော် ၎င်းတို့သည်လွှတ်တော်သို့ လာရောက်၍မေး မြန်းသည်များကိုအဖြေပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လာရောက်အဖြေပေးရာတွင် သမ္မတ သည်တစ်လထက်ပို၍ နောက်မကျစေရ ၊ ဝန်ကြီးဆိုပါက ၁၀ ရက်ထက်ပို၍နောက်မကျစေရ ၊ လွှတ်တော်မှလက်ခံပေးနိုင်မည့် ခိုင်လုံ သောအကြောင်းပြချက်ရှိမှသာ နောက်ကျခွင့်ရှိသည်။.
- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ လိုအပ်သည်ရှိသော် ဝန်ကြီးတစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေခေါ်ယူမေး မြန်းလိုပါက ကိုယ်စားလှယ် ၁၀ ဦးလက်မှတ်ထိုးခေါ်ယူမှသာအတည်ဖြစ်မည်။ ဝန်ကြီးများသည်အတည်ပြုခေါ် ယူပြီးနောက်ပိုင်း ၁၀ ရက်အတွင်းလာရောက်၍မေးမြန်းမှုများကိုရှင်းလင်းတင်ပြရမည်။ အကယ်၍ဝန်ကြီးများအ ဖွဲ့မှလာရောက်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါက လွှတ်တော်မှလိုအပ်သည့်အတိုင်း ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ် ပြီး လိုအပ်သည်ရှိသော်လွှဲအပ်ယုံကြည်မှုပိုင်ဆိုင်ရာအားနည်းကြောင်းထုတ်ဖေါ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လွှတ် တော်မှ ယုံကြည်မှုမရှိတော့ပါက ဝန်ကြီးများကိုရာထူးမှဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဝန်ကြီးများအဖွဲ့တွင်အဖွဲ့ဝင် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သုံးပုံတစ်ပုံမှ သမ္မတ၏နိုင်ငံတာဝန်များနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မေးမြန်းမှုများပြုလုပ်နိုင် သည် ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်လည်း တစ်လအတွင်းလာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသ ဖြင့်သတ်မှတ်မေးခွန်းများကို လုံလောက်သည့်ရှင်းလင်းတင်ပြမှုမျိုးရှိရမည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများကို သမ္မတမှအဖြေပေးရာတွင် ကိုယ်စာလှယ်သုံးပုံနှစ်ပုံမှခိုင်လုံသောအဖြေမဟုတ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချပါက ရဲဟ်ဘဲရ် (အကြီးဆုံးသာသနာ့ခေါင်းဆောင်)သို့တင်ပြမည်ဖြစ်ပြီး ရဲဟ်ဘဲရ် မှလက်မှတ်ထိုး အတည်ပြုပြီးနောက် သမ္မတ ကိုတာဝန်မှရပ်ဆိုင်းလိုက်မည်ဖြစ်သည်။
-မည်သူမဆို လွှတ်တော်နှင့်ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် တရားရေးကဏ္ဍ တို့နှင့်ပတ် သက်ပြီး လွှတ်တော်သို့တိုင်တန်းနိုင်သည်။ လွှတ်တော်မှလည်းလုံလောက်သည့်ရလဒ်များရသည်အထိ ဆောင် ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်၏ တရားစီရင်ရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရေးကိစ္စများဆိုပါက ၎င်း တို့သက်ဆိုင်ရာဌါနအသီးသီးမှ မေးမြန်းစုံစမ်းမည်ဖြစ်ပြီး သင့်တော်သည့်အချိန်၌ကြေငြာပေးမည်ဖြစ်သည်။ အ များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စဆိုပါက အများသိနိုင်မည့်နည်းလမ်းဖြင့်ကြေငြာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။.
အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်သည်လေးနှစ်တစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရသည်။ အမတ်လောင်းများကို သက်ဆိုင် ရာအဖွဲ့အစည်းများမှထောက်ခံချက်ပေးရမည်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းမှာ ၂ အုပ်စုရှိသည် ပထမအဖွဲ့အစည်းမှာအစိုး ရနှင့်ဝန်ကြီးများအဖွဲ့၏အကောင်ထည်ဖေါ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး နောက်အဖွဲ့အစည်းမှာစောင့်ကြပ်ရေးအဖွဲ့အ စည်းဖြစ်သည်။.
အကောင်ထည်ဖေါ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ချက် ၇ ခုဖြင့်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပြီးကိုက်ညီမှုရှိသည့်အမတ် လောင်းများကို စောင့်ကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့တင်ပြမိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက် ၇ ခုမှာအောက်ပါအ တိုင်းဖြစ်သည် - :
ကျန်းမာရေးကောင်းရမည် အကြား အမြင် အပြောအာရုံများကောင်းမွန်ရမည်။
အသက် ၃၀ ပြည့်ပြီးဖြစ်ရမည်။
ဘွဲ့လက်မှတ်ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် သို့မဟုတ်( ၎င်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် ၅ နှစ်တာပညာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။)
အစ္စလာမ် ၊ ဝေလာယသ် နှင့် ဖှစ်ကာကို လိုက်နာယုံကြည်သူဖြစ်ရမည်။
(၎င်းတို့နှင့်ကိုက်ညီပါက) စောင့်ကြပ်ရေးအဖွဲ့ သို့တင်ပြမိတ်ဆက်ပေးပြီး ၎င်းအဖွဲ့အစည်းမှလည်းထောက်ခံ ပေးမည်ဆိုလျှင် ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲဆန္ဒခံယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
ရွေးကောက်ပွဲတွင် လူထု၏ပါဝင်နိုင်မှုမှာ ပထမအကြိမ်တွင် ၅၂% ဒုတိယအကြိမ်၌ ၆၄.၆% တတိယအကြိမ်၌ ၅၉.၇% စတုတ္ထအကြိမ်တွင် ၅၈% ပဉ္စမအကြိမ်တွင် ၇၁.၁% ဆဌမအကြိမ်၌ ၆၇% သတ္တမအကြိမ်တွင် ၅၁.၁၅ % အဌမအကြိမ်တွင်၅၁% နဝမအကြိမ်တွင် ၆၄.၂% ဒဿမအကြိမ်တွင် ၆၁% ဖြစ်သည်။.
လွှတ်တော်အတွင်း တိုင်းအလိုက် နေရာထိုင်ခုံများ~[ပြင်ဆင်ရန်]
အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်တွင်အီရန်၏တိုင်များအလိုက် ထိုင်ခုံပေါင်း ၂၈၅ ခုံရှိသည်။
အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးပြီးနောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးချိန်၌ သာသနာ့ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ် များခန့်ထားရန်အခြေခံစည်းမျဉ်းတွင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော်လှန်ရေးပြီးနောက် ၁၃၅၇ ခုနှစ်အ ခြေခံစည်းမျဉ်းတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိတွင် အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်၌ ဇဲရ်သွရှ်သီ ၊ ကလီမီယါးန် ၊ နှင့် ခရစ်ယာန် တို့မှကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီရှိကြသည်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် ၊ ရပိုင်ခွင့် နှင့်အတိုင်းအတာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ကျမ်းကျိန်ခြင်း - အဆင့်ဆင့်ထောက်ခံချက်ရရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲ၌အနိုင်ရရှိသော ကိုယ်စားလှယ်များသည်ဦးစွာ လွှတ်တော်တွင် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ဖြင့်ကျမ်းကျိန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းကျိန်လွှာတွင် ပါရှိသည့်အကြောင်းအ ရာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ : بسم الله الرحمن الرحیمကျွနု်ပ်သည် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ရှေ့မှောက် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်ကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုပါ၏ ၊ မိမိ၏လူ သားဖြစ်ခြင်းနှင့်မွန်မြတ်သည့်အပေါ် ကတိသစ္စာပြုပါသည် အစ္စလာမ် ၏သိက္ခာ ၊ အစ္စလာမ့်တော်လှန်ရေး၏အ သီးအပွင့် ၊ ပြည်သူ နှင့် အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံတော်အား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါမည်။ ပည်သူမှအပ် နှင်းသောဤတာဝန်နှင့်ဝတ္တရားကို တရားမျှတသူတစ်ဦးအနေနှင့် သစ္စာစောင့်သိ ထိန်းသိမ်းပါမည်။ ကိုယ်စား လှယ်တစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် သီလသမာဓိရှိစွာဆောင်ရွက်ပါမည်။ နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်စွာရပ် တည်နိုင်ရေး ၊ ပြည်သူလူထု၏ရပိုင်ခွင့် နှင့် ပြည်သူတို့ကိုအလုပ်အကျွေးပြုရာတွင် ခိုင်မြဲစွာရပ်တည်ပါမည်။ စည်းမျဉ်းဥပဒေများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည် ၊ ရေးသားပြောဆိုမှု အမြင်များ နိုင်ငံတော်တည်တံ့ခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်ရေး ၊ ပြည်သူလူထု၏လွတ်လပ်ခွင့် နှင့်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည်များကို အကောင်းဆုံးဖေါ်ဆောင်နိုင် ရန်အစဉ်တစိုက်ဂရုပြုပါမည်။
အခြားသာသနာဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း အထက်ပါစာသားများကဲ့သို့ပင် ကျိန်ဆိုရသည် ၊ ကုရ်အာန် ဆိုသည့်နေရာတွင်သာ မိမိတို့၏ကျမ်းများဖြစ်သည့် အောင်စ်သား၊ အင်န်ဂျီလ်၊ သောင်ရာသ် စသည်တို့ကိုထည့် သွင်းရွတ်ဆိုရသည်။
-ကိုယ်စားလှယ်တိုင်း ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည် ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပကိစ္စရပ်အားလုံးကိုဝင်ရောက် စွက်ဖက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသည်။
- မိမိတာဝန်ပိုင်းကိုမိမိ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ရမည် ၊ အခြားတစ်ယောက်အားလွှဲပြောင်းခြင်းမျိုး မရှိစေရ။ .
-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် လူထု၏ရပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာအပိုင်းကဏ္ဍတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိတို့၏အမြင်များဆန္ဒများဖေါ်ထုတ်ရာတွင် လုံးဝလွတ်လပ်မှုရှိရမည်၊ အခြားသူတို့၏ဆန္ဒမဲအနောက်လိုက်ခြင်း (အများသဘောနောက်ရောယောင်လိုက်ခြင်း) မိမိအားအများထောက်ခံလိုစေသောဆန္ဒဖြင့် မိမိ၏အမြင်များကို လွတ်လပ်စွာတင်ပြခြင်းမရှိသည့် အနေအထားမျိုးမဖြစ်စေရ။
လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်။ ရွေးချယ်တင် မြှောက်သည့်သက်တမ်းမှာတစ် နှစ်တာအတွက်ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်၏အတွင်းဥပဒေအရ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံ ရွေးချယ်ခံရန်အတွက် တားမြစ်ထားသည့် ဥပဒေမရှိပါ။ .
အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၃၇၉-၀၁-၂၀ ရက်နေ့ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေအရ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပုံမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ် သည်။ :
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွင်းမှ အသက်အရွယ်အရလူငယ်ပိုင်းအကျဆုံးသူကိုရွေးချယ်တင်မြှောက် ပြီးဒုတိယအသက်အငယ်ဆုံးသူကို ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်။ အသက်အပိုင်းအခြားအရတူညီ နေကြသော်အသက်အရွယ်အငယ်ဆုံးသူများ ကိုရွေးချယ်ပြီး မဲခွဲဆုံးဖြတ်၍တင်မြှောက်သည်။ ထို့နောက်လွှတ် တော်၏ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုကြေငြာမည်ဖြစ်သည်။ (ماده 9)
-အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်၍ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးထားသည့်ဥက္ကဋ္ဌ၏တာဝန်များမှာ - (မိတ်ဆက်) ဖွင့်ပွဲအ ခမ်းအနားကျင်းပရခြင်း ၊ မဲဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရခြင်း ၊ ကျမ်းကျိန်ပွဲကျင်းပပေးရခြင်း ၊ ယာယီဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်တင် မြှောက်ပေးရခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ (ماده 10)
(ခ) ယာယီဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်ရေး[ပြင်ဆင်ရန်]
ယာယီဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သည်ဒုတိယမြောက်စုံညီအစည်းအဝေးတွင် ယာယီဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်တင်မြှောက် မည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပုံမှာအမြဲတမ်းဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့်စည်းမျဉ်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့ နောက်ကျမ်းကျိန်ဆိုပွဲကိုကျင်းပပေးမည်ဖြစ်သည်။ (ماده 11)
(ဂ) အမြဲတမ်းဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး[ပြင်ဆင်ရန်]
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သုံးပုံနှစ်ပုံ၏အတည်ပြုထောက်ခံချက်ရပြီးနောက် ယာယီဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့မှ အမြဲတမ်း ဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကိုဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းဥက္ကဋ္ဌ၏ သက်တမ်းမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ရွေးချယ်သည့်နေ့မှာ ယခင်ဥက္ကဋ္ဌသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် နေ့တွင်ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ရုံးပိတ်ရက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်မှုရှိနေပါကကြိုတင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် ဥက္ကဋ္ဌအသစ်သည်လည်း ရွေးကောက်ပွဲရက်မတိုင်မီ တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ (ماده 13)
အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော် သုတေသနဌါန
-အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော် အစ္စလာမ့်သုတေသနဌါန
-အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော် စာကြည့်တိုက် ၊ ပြတိုက်
-အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော် ကော်မရှင်များအဖွဲ့
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အင်တာနက် အဆက်အသွယ်[ပြင်ဆင်ရန်]
အစ္စလာမ်မစ် လွှတ်တော်သည်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် သီးသန့်အင်တာနက် (ရုံးခန်း) ထားပေးသည် ၊ မိမိ တို့၏သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးနှင့် ထပ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
၁၃၉၆ ခွရ်ဒါဒ် လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဘဟာရစ်္စသာန် လမ်းရှိ အစ္စလာမ်မစ်လွှတ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။ ပ ထမဆုံး ဒါအိရှ် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည် ၊ သတင်းဖေါ်ပြချက်များအရ နံနက် ၁၁ နာရီအချိန်ခန့်၌မျက်နှာဖုံးဝတ် ဆင်ထားသူတစ်ဦး လွှတ်တော်ရှိရာလမ်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာသည်၊ လွှတ်တော်အစောင့်မှပစ်ခတ်ရာထိုလူ၏ခြေ ထောက်ကိုထိမှန်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၃ ဦးထပ်မံရောက်ရှိလာပြီး လွှတ်တော်အတွင်းပစ်ခတ်လေသည် အစောင့် တပ်များ၏ခုခံပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ပုံးကွယ်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းရေးဌါန အဆောက်အဦးမှနေရာယူ ပြီး အတွင်းအပြင်မဲမဲမြင်ရာ ရမ်းကားပစ်ခတ်လေတော့သည်။ ၄ နာရီခန့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုများပြီးနောက် လုပ်ကြံသူ တရားခံ ၄ ဦးစလုံးကိုအသေပစ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ကြံမှုကြီးတွင် ၁၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၄၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဒါအိရှ် အုပ်စုက၎င်းတို့၏လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤအဖြစ်အပျက် ပြီးနောက် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း လုပ်ကြံမှုများဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ .
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
↑ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی။ معاونت حقوقی ریاست جمهوری (1379/01/20)။ 1395/03/09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 13 December 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အစ္စလာမ်မစ်_အကြံပေးလွှတ်တော်&oldid=627092" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။